ကြေကွဲဖွယ်ရာ ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ( ၁ )
ဇေယျသိင်္ခ (၁၂၁၀-၁၂၃၄) အထိ ကွယ်လွန်သောအခါ ၄င်း၏ သားတော် ကျစွာမင်း ထီးမွေ ဆက်ခံသည်။ မြန်မာ ရာဇ၀င်များဋ္ဌ် ရေးသား ထားသည်မှာ ကျစွာမင်း သည် စာပေ ကျမ်းဂန် တွင်သာ မွေ့လျှော်ပြီး နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးကို ၄င်း၏ သားတော် ဥဇနာ အား လွဲအပ် ထားသည်။ ကျစွာမင်း ကွယ်လွန်၍ ဥဇနာမင်း နန်း တက်သောအခါ နိုင်ငံတော်၏ တာဝန်ကို လုံးဝ လှည့်မကြည့် တော့ ဘဲ အရက် သေစာနှင့် အပျော် အပါး လိုက်စားခြင်း အမဲလိုက်ခြင်း ဖြင့်သာ အချိန်ကုန်သည်ဟု ရာဇ၀င်များဋ္ဌ် ဖော်ပြကြသည်။
ရာဇ၀င်များဋ္ဌ် ထင်ရှားကျော်ဇောခဲ့သည့် မိဘုရားဋ္ဌကီး ဖွားစောကို ကျစွာမင်းလက်ထက်မ စပြီး မိဖုရားမြောက် သည်ဟု ရာဇ၀င်များ တွင် ရေးသားထားဋ္ဌကသည်။ ဥဇနာမင်း ကွယ် လွန်သောအခါ ၄င်း၏ သားတော်ဋ္ဌကီးဖြစ်သူ သိင်္ဂသူသည် ထီးနန်း အမွေကို ဆက်ခံရန်ဖြစ် သော်လည်း လွှတ်တော်က မိဘုရားငယ် တစ်ဦးနှင့် ရသည့် သား တော် နရသီဟပတေ့ ကိုသာ ရွေးချယ်ကြောင်း ယင်းသို့ ရွေး ချယ်ခြင်းမှာ လည်း သားတော်ဋ္ဌကီး သိင်္ဂသူ သည် မင်းသားဘ၀ ကပင် လွှတ်တော်ဝန်ဋ္ဌကီးများ အား အနိုင်ကျင့် ဆက်ဆံသော ဋ္ဌေကာင့်ဖြစ်သည်ဟု ရာဇ၀င်များဋ္ဌ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
နရသီဟပတေ့ မင်း၏ နန်းသက်ကို ၁၂၅၄ခုနှစ် မှ ၁၂၈၇ အထိ ၃၃နှစ်ဟူ၍ ဖော်ပြကြသည်။ နရသီဟပတေ့ မင်း လက်ထက် တွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ဋ္ဌေကာက်မက်ဖွယ်ရာနှင့် စိတ်နှလုံး မချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ အဖြစ်ပျက်ကြီးများဖြစ် ပျက်ခဲ့သည်။
နရသီဟပတေ့ မင်းသည် ၄င်းအား ပုဂံထီးနန်းအမွေကို ဆက်ခံ ခွင့်ရရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် ပညာရှိအမတ်ကြီး ရာဇ သဋ္ဌက်န်နှင့် လိမ္မာရေး ခြား ရှိသော မိဖုရားဖွားစော တို့ ကိုပင် အတိုက် ခံပြု၍ မိမိထင်ရာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသော တစ်နေ့ ဟင်းခွက်၃၀၀ စား သည့် မင်းဆိုးမင်းညစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြန်မာရာဇ၀င်များဋ္ဌ် ဖော်ပြ ဋ္ဌကသည်။
နရသီဟပတေ့ မင်းလက်ထက်တွင် ရှမ်း ညီနောင်သုံးဦးဖြစ်သည့် အသခ်ယာ။ ရာဇသဋ္ဌက်န်နှင့် သီဟသူတို့ အစရှိသည့် ကျောက် ဆည် လယ်တွင်းနယ်များဖြစ်ကြသော မြင်စိုင်း၊ မက်ခရာနှင့်ပင်လယ်မြို့ များကို ပေးသနားတော်မူဋ္ဌေကာင်း မြန်မာရာဇ၀င်များတွင်ဖော်ပြ ဋ္ဌကသည်ကိုတွေ့ရသည်။
နရသီဟပတေ့ မင်းသည် တရုတ်နိုင်ငံဋ္ဌကီးနှင့်စစ်ဖြစ်ပွားရ အောင်အမှားမှားအယွင်းယွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုလည်း တွေ့ရ သည်။
ဥရောပတိုက် အရှေ့ပိုင်း အာရှတိုက်အလယ်ပိုင်း နှင့် တရုတ်နိုင်ငံဋ္ဌကီး တခုလုံးကို တိုက်ခိုက် အောင်မြင်လိုက်သော တာတာတို့ ၏ ဧကရာဇ်ဘုရင်ကုဗလိုင်ခန်သည် မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူများထံမှ လက်ဆောင်များ တောင်းခံရန် အတွက် သံအဖွဲ့တဖွဲ့ကို ပုဂံသို့ စေလွှတ်လိုက်ရာတွင် ကုဗလိုင်ခန်၏ သံများကို သံတမန်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲ နရသီဟပတေ့ မင်းသည် မိုက်မိုက်မဲမဲ သတ်ဖြတ်လိုက်ရာ မှ တာတာတရုတ်တပ် များ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်ရောက်တိုက် ခိုက်ဖျက်ဆီးကြောင်း ဖြင့် မြန်မာရာဇ၀င်များဋ္ဌ် ဖော်ပြကြသည်။
မြန်မာရာဇ၀င် တော်ဋ္ဌကီး ( ဦးကုလား )
Posted by မသက်ဇင် at 6:10 PM
အမလာဖတ်သွားပါတယ်။ သမိုင်းတွေကိုဖော်ထုတ်တဲ့ရှားပါး website မို့လာလယ်ပါဦးမယ်
အခုလို ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ
ဘလော့ခ်တစ်ခု မှာရှည်လျားလှတဲ့ သမိုင်းရာဇ
၀င်များရေးဖို့မလွယ်ကူမှန်း နားလည်ပါတယ်၊၊ခုလိုဖော်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ မသက်ဇင် ၊၊ အကျိုးပြုမှာပါ ၊၊
တင်ပြီဆိုရင် သံချောင်းခေါက်ပါအုံးနော်။း)
ကြေကွဲဖွယ်ရာ ပ - မြန်မာနိုင်ငံတော်ကို လာဖတ်သွားပါတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
ဖတ်သွားပါတယ် အစ်မ အားပေးနေပါတယ်
သမိုင်းကြောင်းတွေကို ရှာရှာဖွေဖွေ စုဆောင်းတင်ပြ
ကျမ်းကိုးနဲ့ တွဲတင်ပေးတာ ပိုကောင်းတယ်ဗျ။
အလည်လာပြီး သမိုင်းတွေ ဖတ်သွားပါတယ်..ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေပါစေ..မသက်ဇင်...
မင်းအဆက်ဆက်က တစ်ဦးတည်းသောအမျိုးသမီးကို မိဖုရားခေါင်(သို့) မိဖုရားမြှောက်သည်ဆိုသည်ကို ကြုံရင် အကျယ်ရှင်းပြစေချင်ပါတယ်..။ဥပမာ ဖခင်ဘုရင်လက်ထက်က မိဖုရားသည် သားတော်ဘုရင်ဖြစ်လာတော့ရောမိဖုရားအဖြစ် ဆက်တင်မြှောက်ရင် ထိုနှစ်ဦးဆက်ဆံရေးသည် အဘယ်သို့နည်း၊မရှင်းပါ။ ရာဇ၀င်များဋ္ဌ်ထင်ရှား ကျော်ဇောခဲ့သည့် မိဘုရားကြီးဖွားစောကိုကျစွာမင်း လက်ထက်မှစပြီး မိဖုရားမြောက်သည်ဟု ရာဇ၀င်များ
အမေ ရင်း မဟုတ်လို့ ဖြစ်မယ် ဗျ :)
မသက်ဇင်ရေ အခုလို အရေးအသားတွေ မြန်မာဝီကီမှာ အရမ်းလိုနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ လာရောက်ဝေမျှပေးလှည့်ပါ။
ဗဟုသုတ ရပါတယ်ဗျာ... အဆင်ပြေပါစေ
အသိတယောက်က ခဏခဏညွှန်းလို့ လာဖတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဘလော့ဂ်လေးဖြစ်မှန်းသိသွားလို့ Favorite ထဲမှာ ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီလို သမိုင်းကို ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့ဘလော့ဂ်မျိုး ရှိသင့်ပါတယ်။ သမိုင်းကို ၈ တန်းအထိပဲ သင်ခဲ့ရဖူးပေမယ့် စိတ်ဝင်စားလို့ တွေ့တဲ့နေရာ တော်တော်များများမှာ လိုက်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Keep going your good job
မင်္ဂလာပါ ရှမ်းမလေး မသက်ဇင်ရေ ၊၊သတိရပါဒယ် ၊၊ စီဘောက်မရှိလို့ ဒီမှာပဲရေးထားခဲ့တယ်ဗျာ ၊၊ ကိုယ်တိုင်ဖြူစင်ဖို့ က အဓိကပါ၊၊ ဂရုစိုက်နေစရာမလိုပါဘူး ၊၊ချီးမွမ်း ၊ကဲ့ရဲ့(၇) ရက် ဆိုတဲ့ စကားတောင်ရှိသေးတာပဲဗျာ ၊၊ ငြိမ်းချမ်းပါစေနော် ၊၊
ကြေကွဲဖွယ်ရာကတော့ ပထမနိုင်ငံတော်ကထဲက စနေပြီပေါ့နော။
လာလည်ပါတယ် မသက်ဇင်ရေ။ ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ။ သမိုင်းတွေကို မပျင်းအောင် ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အားလဲပေးပါတယ်။ ဆက်ေ၇းပါဗျို့
အမရေ.. ဖတ်သွားတယ်ဗျိုး... မင်းဆိုးမင်းညစ်တွေ အကြောင်းဖတ်ရရင် ရင်နာစရာတွေပါပဲ အမရာ... အမရေးထားတာလေး သိပေမဲ့ပြန်ဖတ်တော့လည်း အသစ်လိုပါပဲ... အမအရေးကောင်းတာကြောင့်ပါ..
Dear Ma Thet Zin,
I am alsoablogger and have major interest in history of ancient Burma and South-east Asia and neighbouring countries. Not only Harvey, there are quiteanumber of scholars and historians who had written several texts. They are N. Tarling, Moore, Bod Hudson, Majumdar, Prakash Singh Jammu, Col. Ved Praksh and so many more. Please also visit my blog below.